Vaovao - Fihaonamben'ny teknolojia CCDF _ Karazana fivoriambe ho an'i Changhong
Fihaonamben'ny teknolojia CCDF _ Karazana fivoriambe ho an'i Changhong
Ny komity mpikarakara ny valam-pandrosoana fampiroboroboana indostrialy voalohany sy ny Konferansa fanao isan-taona an'ny CCDF China Display Prop Prop dia natombok'ireo fikambanana indostrialy sy orinasa lehibe voasoratra mifanaraka amin'ny lalàna manerana ny firenena. Ny iraka dia ny fanatsarana ny fahaiza-manao fototra indostrialy sy ny haavon'ny rojo indostrialy ary hampiroborobo ny fivoaran'ny teknolojia eo amin'ny sehatry ny indostria. Ny valan-dresaka voalohany & Fihaonamben'ny teknolojia Changhong Technology dia mifantoka amin'ny "tranga, volavola, haitao, Digitization ary fampiharana".
Ny famolavolana lohatenim-pivoriana fanao isan-taona an'ny teknolojia CCDF dia navoaka voalohany ho an'i Changhong. Ny toerana lehibe dia ao Shina ny fivorian'ny fivarotana ara-barotra, manatsara ny fahombiazany, mampihena ny vanim-potoana fananganana, ny fiarovana ny karbaona ambany sy ny tontolo iainana.
Famolavolana sy drafitra Changhong ny toerana lehibe amin'ny fivoriana fanao isan-taona momba ny haitao: ny faritra fandraisana sy ny fiarovana azo antoka amin'ny rihana voalohany, ny rindrina fampirantiana ara-kolontsaina, ny fidiran'ny tompon'ny klioba, fivarotana fanandramana Huawei, fivarotana fanandramana Xiaomi, efitrano fandraharahana China Telecom 5G, Fivarotana za-draharaha Nike, faritra fampiratiana rojo famelomana, sehatra misy fampiasa maro, faritra fandraisam-bahiny, faritra fifampiraharahana ary toerana lehibe misy fampiasa maro
Fotoana fandefasana: Jun-28-2021